Cho: ကိုယ်တော် မှ တပါး မရှိ ကိုယ်တော် ကဲ့သို့ တို့ထိနိုင် သူ မရှိ ထာဝရ ကာလတိုင် ရှာဖွေ သော်လည်း မတွေ့ ကိုယ်တော် မှ တပါး မရှိ Verse: ကရုဏာ တော်သည် မြစ်ရေ ကဲ့သို့စီး လက်တော် ဖြင့် ကျန်းမာ စေသည် ဒုက္ခ ရောက်စဉ် ကိုယ်တော် ကွယ်ကာ မစ ကိုယ်တော်...
Verse 1: တေးသွားများကုန်ချိန် အားလုံးလွင့် ပျောက်သွား နှိမ့်ချတိုးဝင်ရင် သခင့်အတွက်ပေးချင်သူ ကြီးမြတ်ထိုက်တန်ခြင်း သခင့်ရဲ့ သဘောအလိုအတိုင်း Pre Cho: နှုတ်သက်သက်ချီးမွမ်းဆိုခြင်းမဟုတ် ပိုလေးနက်သောအရာ သိချင်းသက်သက်မနှစ်သက်သူပါ အတွင်းနှလုံးမှထွက်သောအရာများ သဘောကိုကြည့်သောဘုရားဟာ နှလုံးသားသိမြင်သောအရှင် Chorus: ဦးလှည့်လို့ကိုးကွယ်လိုစိတ်တစ်ခုတည်းသာ အရာရာကိုယ်တော်အတွက်ပဲ အရာရာအားလုံး ယေရှု အတွေးမှားသမျှသခင်.ထံမှာတိုးလျှိုးတောင်းပန် အရာရာကိုယ်တော်အတွက်ပဲ အရာရာအားလုံး ယေရှု Verse 2: ကြီးမြတ်စိုးစံအရှင် အတုမဲ့မြတ်နာမ ကြီးမြတ်ထိုက်တန်ခြင်းနွမ်းပါး ဘဝထဲအားလုံးပေးသနားမူ ထွက်သက်နှင့်ဝင်သက်...
V:1 အသန့်ရှင်းဆုံးသော ဘုန်းတန်ခိုးအန ္တ ကျွန်ုပ်အတွက် အမြဲတမ်း ကောင်းမြတ်ဆုံးဘုရား အာရုဏ် လင်းစမှ နေဝင်မိုးချုပ်ထိတိုင် ခိုကိုးရာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘုရား V:2 သခင့်ရဲ့ကျေးဇူး သခင့်ဂရုဏာများ လုံလောက်ခဲ့ ကျွန်ုပ်ဘဝ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား ကွယ်ကာသခင့်မျက်မှောက်တော် ဌါနမှာ နေရာကြောင့် CHO: အိုငါဝိညာဉ် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းအစဉ်/စေ ကိုယ်တော်သာလျှင် ကယ်တင်ပိုင်ရှင် အို ငါဝိညာဉ် ကယ်တင်ရှင်အား ချီးမွမ်း ကြီးမြတ်တော်မူ ကြီးမြတ်မူပေ...
Verse: 1 ကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းလောက အလှကမ္ဘာ စိတ်လှုပ်ရှား အံသြဖွယ် လက်ရာ ရောင်စုံတိမ်တိုက်ကောင်းကင်မိုးကြိုးသံ .. တန်ခိုးနဲ့ သက်သေ တည်မြဲခြင်း… သာယာ ရှုခင်း ကျေးဌက်တေးသံ ချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့ သီချင်းဆို လေပြေလေညှင်းကလေးတွေပြေးဆော့ကာ စမ်းချောင်းကလေးတွေ လှုပ်ရှားသွား Cho: အို…ငါ့ဝိညာဉ် ကိုယ်တော်အား ချီးမွမ်း… ကြီးမြတ်လှသည့် အကြောင်းကို.. အို…ငါ့ဝိညာဉ ဘုရားသခင်မြတ်ကို ချီးမွမ်းပါ.. ကြီးမြတ်လှသည့် အကြောင်းကို.. Verse:2 ကိုယ်တော်ဘုရား လောကသားကို...
Verse: မတတ်နိုင်သောသူ ယေရှု ကြောင့်တတ်နိုင်သည် မထိုက်တန်သောသူ ယေရှု ကြောင့်ထိုက်တန်သည် ကျွန်ုပ်ရဲ့အထံမှာ ခရစ်တော်အသက်ရှင်နေ ခွန်အားနည်းသူ ကျွန်ုပ်ကို ခွန်အားနှင့်ပြည့်စေပြီ Cho: ယေရှုရဲ့ အသွေးတော်ကြောင့် အပြစ်မှလွတ်ကင်းပြီ ယေရှုရဲ့ ဒဏ်ချက်တော်ကြောင့် အနာရောဂါပျောက်ကင်းပြီ ယေရှုရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်လည်းဖြောင့်မတ်ပြီ ယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေအားလုံး ကျွန်ုပ်၌ ဖြစ်စေပြီ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်
Verse 1: ဘဝမှာအမှာင်ဆုံးအချိန် အခက်ခဲတွေ ဖြတ်သန်း/ချိန် ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘေးနား အမြဲတမ်းရှိသူ ယေ ရှု အားငယ်တဲ့အချိန်တိုင်း ဝိညာဉ်အတွင်းမှ စကားပြောတယ် ကိုယ်တော်ရှိကြောင်း သိစေတယ် V:2 မျှော်လင့်တာတွေ ဖြစ်မလာ ဆုတောင်းတာတွေ ကြန့်ကြာ သခင်မျက်မှောက်က အဝေးထွက်သွားပြီလား … တွေးနေမိပါတယ် မေးခွန်းထုတ်မိလည်း ဘယ်တော့မှ အဆိုးတော့ မကြံစည်ဘူးယုံတယ် CHO: သခင်ကျေးဇူးတော် ကျွန်ုပ်အတွက်လောက်ပေ၏ သခင်ကျေးဇူးတော် ရေတွက်လို့ မဆုံးနိုင်ဘူး အကောင်းမြတ်ဆုံးပါ...
V1: ကျွန်ုပ်အသက်အတွက် အသက်ပေးသူ ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက် ကိုယ်စားထမ်းရွက်လေသူ ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ အဆိုးများ လွင့်စေတဲ့သူ V2: ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးသူ သခင့်ရဲ့ဂရုဏာတရား အပြည့်ဝခံယူ ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိစေတဲ့သူ CHO: အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရား ကိုယ်တော်ရှင်သာထာဝရပါ မြေမှုန့်ထဲမှ ကျွန်ုပ်အားရွေးနှုတ်ခြင်းက သခင့်အတွက်ပါ ယေရှုရှင် ကိုယ်တော်တပါးသာ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးစေပါ အနိမ့်အမြှင့်အတက်အကျ ဘယ်လိုအရာတွေ ကြုံတွေ့လာ ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အနားနားအမြဲတမ်းရှိခြင်းကတသက်စာ ဒီဘဝမှာ ကျေးဇူးတော်မှတပါး အခြားသောမင်္ဂလာ ကျွန်ုပ်၌မရှိပါ…
Verse 1: ကျေးဇူးတော်ခွက်ဖလားလျှံလျက်ရှိပါ၏ နေ့ရက်စဉ် ဂရုဏသစ် ခံစားရသည် အသက်တာ၏ လမ်းခရီး နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကျေးဇူးတော်နှင့် ပတ်ရစ်မူသည် Verse 2: ကောင်းမြတ်ခဲ့ပြီ မနေ့က ကောင်းမြတ်သည် ယခု ကောင်းမြတ်အုံးမည် ရှေ့အနာဂတ်မှာ ချီးမွမ်းမည် ကိုယ်တော် ကောင်းမြတ်ကြောင်းကို ချီးမွမ်းနေမည် နေ့ရက်အချိန်တိုင်း
V1. အကြီးမြတ်ဆုံးဘုရား သခင့်ရဲ့ရှေ့တော်မှာ ကျွန်ုပ်သည် ဗလာအနတ္တိပါ အကောင်းမြတ်ဆုံး ဘုရား သခင့်ရဲ့ရှေ့တော်မှာ ကျွန်ုပ်သည် မစင်ကြယ်ဆိုးသွမ်းသူ Pre. သခင့်ရဲ့အချစ်သာ ကျွန်ုပ်အားသခင့်နားရောက်စေ (အရာခပ်သိမ်းတတ်စွမ်းစေ) သခင့်ရဲ့အချစ်သာ အမြင့်ဆုံးပလ္လင်တော်ရှေ့ ကျွန်ုပ်ရောက်စေ Cho. ကိုယ်တော်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်၏ အရာရာတိုင်း ကိုယ်တော်အမြဲ အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ် အသက်ရှင် ကိုယ်တော်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်၏ အရာခပ်သိမ်း ကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်ရှေ့မှောက် ပြပ်ဝပ်ဒူးထောက်လျက် ကိုးကွယ် (ကောင်းကင်ဘုံ အဖ)2 V2....